Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2: Nkọwa na Mwepụta Ọchịchị | Akụkọ akụrụngwa
Samsung na-emeziwanye ọnụnọ ya na ahịa a na-eji ejiji. Akụkụ nke a metụtara ọnọdụ ọhụrụ ya, nke hapụrụ anyị elekere na ọtụtụ ọla aka afọ a. Koreandị Korea na-eji ohere nke Galaxy Note 10 eweta elekere ọhụụ. Ọ bụ ihe gbasara 2 Galaxy Watch na-arụ ọrụ, nke e gosipụtara na Mọnde a.
The Galaxy Watch Active 2 bụ onye nọchiri anya elekere ahụ na ha hapuru anyi na February. Companylọ ọrụ ahụ emeela ka akụkụ ya ụfọdụ ka mma, dị ka iwebata ọrụ ahụ ike ọhụrụ. Na mgbakwunye, ha hapụrụ anyị ntakịrị mgbanwe n’ichepụta elekere a, nke a kpọrọ ka ọ bụrụ ọganiihu ọhụrụ maka Samsung.
N'okwu a, imewe na-anọgide fọrọ nke nta emebibeghị. Samsung ewebatala n'ime ya ihe akpọrọ bezel taabụ (Touch Bezel). Ekele ya, a na-enye onye ọrụ ohere nke ịgagharị interface ahụ site na imetụ ihu aka, mana na-emeghị ya n'ezie. A ụdị ogbugbu igodo, na-akpọ ya. Ma ọ bụghị na ọ nweghị mgbanwe, belụsọ na a tọhapụrụ ya nha abụọ.
1 Nkọwapụta Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2
Nkọwapụta Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2
Anyị zutere nha abụọ dị iche iche na Galaxy Watch 2 na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie na nkọwa ya ka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu na isi akụkụ. Mana enwere iche na batrị, dịka ọmụmaatụ. E gosipụtara ese abụọ ahụ dịka nhọrọ zuru oke na ngalaba ahịa a. Samsung na-ahapụ anyị na elekere na-arụ ọrụ nke ọma, nwere ezigbo nhazi na ha enweela ike iwebata ọrụ ọhụụ na-atọ ụtọ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Nguzogide: MIL-STD-810G nguzogide agha agha Ihuenyo na Gorilla Glass DX + iko
Na ohuru ohuru nke Galaxy Watch anyị na-achọta abụọ dị ukwuu ozi ọma, ma ihe banyere ọrụ. Ha na-leaked a izu ole na ole gara aga, na ha na-eme ka o doo anya na Samsung emeela ihe Apple Watch, ebe ha bụ abụọ ọrụ na-ugbu a na-adịbeghị anya ọgbọ nke Apple ese. Ọ bụ ihe gbasara electrocardiogram na nchọpụta ọdịda.
Igwe electrocardiogram bụ ọrụ kpakpando n'ọgbọ ohuru a nke nche. N'ihi ọrụ a, ọ ga-ekwe omume iziga mkpali eletriki n'ime obi, iji nweta ọgụgụ miri emi ma nwee ike ịchọpụta ihe na-adịghị mma, dịka enwere ike arrhythmias n'ime obi. Ọ bụ atụmatụ nwere nyocha dị mma na Apple Watch, yana inye aka ịchekwa ndụ ụfọdụ ndị.
N'aka nke ọzọ, anyị na-achọpụtakwa nchọpụta ọdịda na Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2. Ọ na-arụ ọrụ ekele maka osoolu nke elekere. Emere ya iji chọpụta ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nwere nsogbu ma ọ bụ daa na mberede, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gwapụta ihe mberede. Yabụ na ọ nwere ike ịbụ ihe bara nnukwu uru maka ndị ọrụ.
Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ 2 na-ebupụta na nsụgharị abụọ, na-adabere nha, dị ka anyị hụworo na nkọwa ya. A ga-ebikwa ha na agba dị iche iche, nwere ụdị eriri dị iche iche, nke mere na onye ọrụ ọ bụla ga-ahụ ihe nlereanya kachasị dabara n'ụdị ma ọ bụ ụtọ ha. Companylọ ọrụ ahụ ekwenyela na ọnụahịa nke nha elekere abụọ a:
Diameterdị 40mm nke dayameta dị ọnụ 279,99 dollar (ihe dị ka euro 250 iji gbanwee)
Dị elekere ahụ na ikpe 44 mm na-akwụ ụgwọ 299,99 dollar (ihe dị ka euro 268 iji gbanwee)
Banyere igba egbe ahụ, a na-atụ anya na ha ga-abata n'ọnwa Septemba, opekata mpe na United States. Mbido ya na mba a ga-eme na Septemba 27Ọ bụ ezie na oge ndoputa ga-emeghe na September 6. O yikarịrị ka nke a bụ ihe zuru ụwa ọnụ, yabụ anyị nwere ike ịtụ anya na ha n'otu ụbọchị dị na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2: smartwatch ọhụrụ nke Samsung